inona ny CNC Lathing? | PTJ hardware inc.
Inona no atao hoe CNC Lathing?
Ny anjara asan'ny fanaraha-maso isa (solosaina) dia mitohy mitombo miaraka amin'ny fizotran'ny milina marimaritra iraisana ary ao anatin'izany ny lathes. Izy irery ihany, ny lathe dia manondro milina iray amin'ny famolavolana sy fiasana fitaovana misy fitaovana isan-karazany, anisan'izany ny vy. Miaraka amin'ny herin'ny CNC, ity dingana ity dia mampitombo ny fahamendrehana sy ny famerimberenana, izay manatsara ny famokarana singa sarotra. Ianaro bebe kokoa momba ny fiasa - ary koa ny tombony sy ny fampiasana - ny milina lathe CNC etsy ambany.
Ahoana no fiasan'ny CNC Lathes
Ilaina ny mandinika ireo singa manakiana an'ny lathes CNC hahafantarana ny fiasa ao ambadik'izy ireo. Anisan'izany ny: ● Turret: manara-maso ny fitaovanao manapaka, na manapaka, amin'ny alàlan'ny fametahana azy.
● Chuck: mitazona ny fitaovan'ny vokatrao, fantatra koa amin'ny hoe vice.
● Slide: mamela ny turret hitodika famaky maromaro ho an'ny fanapahana marina.
● Cutter: Mamolavola na manapaka ny fitaovan'ny vokatrao.
● Mpiambina: Arovy ny mpandraharahao amin'ny alàlanao ny faritra iasan'ny lathe CNC.
● Interface: Omeo ny mpandraharaha na ny programmer anao ny fahaizana mitantana ny fizotry ny milina lathe rehetra anao.
Ny dingana tsikelikely amin'ny fomba fiasan'ny lathes CNC dia toy izao:
1.Ny mpanatrika dia mampakatra ny antontan-taratasy famolavolana fanampiana amin'ny alàlan'ny solosaina (CAD) na fanamboarana fanampiana maloto (CAM).
2.Nampidirin'ny mpandraharaha ny fitaovana ilaina sy ny fanapahana.
3. Mihidy ny mpiambina ary manomboka miasa ny lathe aorian'ny fankatoavana avy amin'ny mpandraharaha.
4.Ny spindle, cutter ary ny turret dia miasa amin'ny fandrindrana mba hamolavola ny vokatrao mifanaraka amin'ny drafitra.
Aorian'ny famaranana dia esorin'ny mpandraharaha ilay fitaovana ary dinihiny raha misy lesoka mety hitranga.
Ny tombotsoan'ny Lathes CNC
Ny fampiasana lathes CNC dia manome tombony maro, anisan'izany ny:
● Fahamarinana: ny marimarina ao amin'ny CNC dia tsy manan-tsahala, mihoatra ny fizotran'ny latina tanana tamin'ny taona lasa. Ho an'ireo orinasa mamokatra akora amin'ny ambaratonga marobe, tombony lehibe io izay mety hiteraka vokatra tsara amin'ny vidiny ary koa fahombiazana. ● Famerimberenana: Io fahamendrehana tsy mitovizan'ny milina lathe CNC io dia azo adika amin'ny famokarana avo lenta. Azon'izy ireo atao ny mamerina tsy tapaka ny antontan-taratasinao CAD na CAM manala ny lesoka amin'ny lathes nentim-paharazana ary manatsara ny fividiananao ara-nofo. ● Fampiasana: ny fampidirana ny haitao amin'ny toeram-piasana matetika dia mety hitarika ho amin'ny fampiatoana miadana ataon'ny mpampiasa. Nahafantatra izany ny mpanamboatra ny lathes CNC, ka izany no antony nanamboaran'izy ireo ny fitaovan'izy ireo hanasongadinana interface mora ampiasaina izay manatsara ny tahan'ny fandraisana an-tanana sy mampihena ny lesoka mety hitranga noho ny fihodinana ianarana.
● Famokarana: Ny tombony latte an'ny CNC ny fahamendrehana, ny famerimberenana ary ny fampiasana azy rehetra dia manome fanohanana amin'ny fizotry ny famokarana izay mampitombo ny fampiasam-bolan'ny mpampiasa amin'ny fomba ara-bola sy ara-potoana, izay mety hitarika any amin'ny faritra hafa.
Fampiharana masinina Lathe CNC
Manerana ny indostria, manomboka amin'ny fananganana ka hatramin'ny fitaterana, ny milina lathe CNC dia ilaina amin'ny famokarana vokatra maromaro, ao anatin'izany:
● Barika basy
● Kapoka baseball
● Ary bebe kokoa Raha mitady hamorona vokatra namboarina ianao amin'ny alàlan'ny famaritana ny latte CNC, afaka manampy ny ekipanay.
Matokia PTJ Factory, Inc. ho an'ny CNC Lathing
Ao amin'ny The PTJ Factory, ny tantarantsika sy ny traikefanay dia manodidina ny folo taona mahery sy indostria maro karazana. Miaraka amin'ny fahaizanay amin'ny famokarana ny masinina haitao manokana sy ny fankatoavana ISO 9001: 2015, ary koa ny milina miisa 35 mahery miaraka amin'ny haitao mandroso, izahay no safidy matoky ny fikambanana kely, salantsalany ary lehibe - ao anatin'izany ny Fortune 500 Ampifanaraho amin'ny fenitra sy ny fahaizan'ny The PTJ Factory, Inc. amin'ny alàlan'ny fifandraisana aminay anio.
fanamarihana: Serivisy fanodinana CNC,Serivisy fanodinana CNC,Serivisy fandavahana CNC